Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Ahoana no To Travel Eco Friendly In 2020?
Ny Bygone fahasoavana fitsangatsanganana lamasinina
Maro ny dia lavitra nisafidy ny hampihenana ny entona karbona dian-tongotra manidina na kely na amin'ny alalan'ny fiaramanidina avy nanapaka tanteraka Tsidika, ankamaroan'ny mba ho setrin'ny teny malaza soedoa Flights Henatra (sidina mahamenatra). Tsy takona afenina fa ny fitsangantsanganana an-habakabaka dia iray amin'ireo mpamatsy vola haingana indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro. Manidina foana na ho mpilalao tena lehibe eo amin'ny fomba misafidy ny Travel, dia mila ny hampahatsiahivina fa hafa endrika nandeha tolotra mampitolagaga Eco fety.
Train Tsidika manana nostalgic Ambiance fahiny, fahasoavana ary mahery vaika Eco-namana mandeha fandraisana an-tanana. Manolotra ny soa isan-karazany ao anatin'izany bebe kokoa legroom, nisakafo tao amin'ny fisakafoana fiara tsara tarehy raha mbola mankafy ny toerana manodidina, niara-dia ankizy dia mora lavitra sy ho an'ireo te hijanona mifandray, tsy misy maody en-flight. Train Travel ampitoviny mazava tsara ny tompon'andraikitra Travel.
Ny fanohanana ny eo an-toerana dia tsy an Eco namana Travel fandraisana an-tanana fa ny fiaraha-monina ihany koa upliftment fandraisana anjara. Mividy an-toerana dia midika fa tsy misy olona maintsy hitondrana ireo entana. kokoa, orinasa eo an-toerana dia manana ny fahafahana miroborobo. Izy io dia fihenan'ny dian-karbaona ary mandresy ny fiarahamonina eo an-toerana.
A toerana Manasa ny mpandeha mba hanitrika ny tenany amin'izay rehetra manana ny tolotra. Tsy tena misy fomba tsara kokoa ny mponina ao aminy mifandray amin'ny, hiaina ny kolontsainy, ary mifaly amin'ny tontolo manodidina. Fitateram-bahoaka no mandray fotsiny fa sady mandeha dia na dia tsara kokoa hafa.
Fomba iray hafa milalao ny anjara Travel maharitra dia ny mba jereo kely ny Travel maika. An Eco namana Travel fitaovana dia mety ahitana ny volotsangana borosy nify, bara shampoo, ary bara savony fa tsy gel mandro. Shampoo sy minier kely ary lozisialy mihosin-drano azo ampiasaina indray. Aluminum water bottles are vital as well as metal straw.
Ny lehibe indrindra Travel fironana ho 2020 milaza fa experiential mandeha no fomba vaovao mba handeha. Move over, dia ho an'ny classika. Izany no mahatonga ny traikefa izay toerana ho an'ny kolontsaina seho manokana, fiaraha-mientana, ary fahitana tsy manam-paharoa amin'ny toeran-kaleha.
Raha miahy ny tontolo iainana ary tia ny fahaiza-mandeha, dia hitahiry, hiarovana, ary manao ny diantsika dia midika zavatra ho an'ny tombontsoa iraisan'ny planeta sy Eco fizahan-tany. Atombohy amin'ny alalan'ny famandrihana fiaran-dalamby dia niaraka tamin'ny Save A Train, amin'izao fotoana izao!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ahoana no To Travel Eco Friendly In 2020?” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)